Maxaabiis reer Galmudug ah oo maanta laga soodaynayo xabsi kuyaal Puntland | Wardoon
Home Somali News Maxaabiis reer Galmudug ah oo maanta laga soodaynayo xabsi kuyaal Puntland
Maxaabiis reer Galmudug ah oo maanta laga soodaynayo xabsi kuyaal Puntland
Xildhibaano katirsan Galmudug ayaa u yimid Puntland sidii ay maamulka Puntland ugala wareegi lahaayeen maxaabiis Burcad badeed ah oo kasoo jeeda Galmudug, kuwaas oo sanado badan ku xiran xabsiga dhexe ee Garowe.
Maxaabiistan oo lagu maxkamadeeyay jasiiradda Seychelles ayaa sanadkii 2013 loosoo wareejiyay Puntland si ay xabsiyadooda ugu dhameystaan dalka gudihiisa.
Balse, golaha Wakiilada Puntland ayaa bishii june ee sanadkaan laalay heshiis is-afgarad ah oo oggolaanayay in xabsiyada Puntland lagu hayo maxaabiis Soomaaliyeed oo ay dowlada Seychelles u haystey falal burcad-badeednimo.
Xildhibaanada barlamaanka Galmudug oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada barlamaanka Galmudug, Yoonis Shaare, ayaa lagu wadaa in ay la wareegaan maxaabiistaan.
Puntland iyo Galmudug ayaa horey uga wada hadlnay sidii maxaabistaan loogu celin lahaa degaanadooda.
Previous articleDAAWO:-Xaawo Xalane “Ninaan 100 wiil keeni karin anaga nootalin maa”
Next articleDAAWO:-Afhayeenka musharixiinta oo weeraray Farmaajo
Wasiir xaday 400,000 oo doolar oo lagu xukumay shan sanno oo...
Wasiirka amniga Galmudu oo ka hadlay taliyihii dhuusamareeb ee iscasilay+Video